Mgbasa Ozi PPC - Ọnụ Ahịa, Nlaghachi Elu
Tinye Aka Gị na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi PPC
Monday, August 29, 2011 Monday, October 12, 2015 Chris Bross
Yabụ ị na-azụ ahịa na ahịa jupụtara na ya. O yikarịrị, nke a pụtara na ị na-emegide ụfọdụ mara mma nkedo CPC maka isiokwu. Ma ọ bụ ma eleghị anya, ị bụ onye nwe ụlọ ahịa na-azụghị ahịa, onye ga-achọ ịbanye na mgbasa ozi n'ịntanetị mana ọ naghị adị gị ka ị nwere ego ịzụ ahịa zuru oke iji zoo. Dika mgbasa ozi intaneti na ahia PPC toro, otua ka asọmpi di, nke na eme ka ego di elu. Tupu ị kpebie na PPC anaghị arụ ọrụ maka gị (ma ọ bụ na ị gaghị arụ ọrụ, ọ bụrụ na ibidobeghị), tụlee Mgbasa Ozi Ahịa.
Na ahụmịhe anyị, ọtụtụ ndị mgbasa ozi PPC na-amalite site na ịtụle isiokwu dị mkpa na metụtara njikọ azụmahịa ha. Ọ bụrụ na ịnọ n’ala na ụlọ, ị ga - agwa okwu dịka ‘ụlọ maka ire ere,’ ‘zụta ụlọ,’ were gabazie. Nke a na-eme ka uche zuru oke, ọ bụkwa kpọmkwem ihe anylọ Ọrụ Enyemaka ọ bụla ma ọ bụ ndu PPC ga-agwa gị mee. Kedu ihe ma ọ bụrụ na isiokwu ndị ahụ na-efu oke maka mmefu ego kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa ọnwa ị ga-eji? Ihe ọzọ ị ga-eme ga - abụ ịchọ mkpụrụ okwu adịghị ọnụ ọnụ iji kwụọ ụgwọ. Kama ịga n'ihu na-egwupụta maka mkpụrụ okwu anwansi ole na ole ndị dị ka ndị dị oke ọnụ, tụlee iwulite mkpọsa dabere naanị na usoro akara. Site na 'okwu akara,' M na-ekwu okwu ndị na-adabere na aha aha gị.
Dị ka ihe atụ, anyị ga-eji m chepụtara echepụta tii azụmahịa TeaFor2.com na depụta a ole na ole ika metụtara metụtara Keywords:
Storelọ ahịa Teafor2.com
Tii maka 2
Dịka ị pụrụ ịhụ, usoro niile edepụtara ebe a bụ n'ụzọ ụfọdụ metụtara aha njirimara, teafor2.com. Mepụta Mgbasa Ozi suchdị dịka nke a na-abụ ụzọ dị mma iji wulite mmata aha gị, ma na-agba ọsọ PPC na-aga nke ọma maka obere ego karịa ego ị ga-eji na-achụ ihe ndị kachasị ewu ewu na ya wee dị oke ọnụ.
Ugbu a na ị nwetara echiche dị mkpa maka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi, ebe a bụ aro ole na ole ị ga-atụle mgbe ị malitere:
tinye Njikọ Njikọ Google na mgbasa ozi gị na Mgbasa Ozi Ahịa, iji mee ka ndị ọrụ banye na saịtị gị ma nyekwuo nhọrọ mgbe mgbasa ozi gị pụtara.
Echefula banyere ebe na ndọtị ekwentị, nakwa. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ obere azụmaahịa mpaghara. Igosi ndị ọrụ ebe ị nọ na inye njikọ ọsọ ọsọ iji kpọọ gị nwere ike inye aka mee ka mgbasa ozi Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi gị dịkwuo elu.
Mgbasa Mgbasa Ozi dị mma maka azụmaahịa oge, ebe ha na-enye nhọrọ mkpọsa dị ọnụ ala nke enwere ike ịgba ọsọ kwa afọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ere ihe eji egwu mmiri, ị nwere ike ọ gaghị enwe mmasị ịme mgbasa ozi gị n'etiti oge oyi mgbe ahịa gị na-adịkarị ala. Agbanyeghị, ịme mkpọsa Mgbasa ozi na ọnwa niile nke afọ ga-eme ka aha gị pụọ, yana iweta ụfọdụ n'ime njem ahụ na-apụ n'oge oge mgbasa ozi gị anaghị arụ ọrụ.
Anyị mepụtara mkpọsa maka ọtụtụ ndị ahịa m, ụfọdụ n'ime ha na-agba ọsọ naanị na usoro akara, yana ndị ọzọ gbara ọsọ Mgbasa Ozi Mgbasa n'akụkụ mkpọsa ọdịnala. N'ọtụtụ oge, anyị achọpụtala na Mgbasa Mgbasa Ozi ahụ karịa ndị ọzọ na ọnụ ala. Ọ bụ nnukwu ụzọ ndị ọhụụ PPC ga-esi wụbanye n’emeghị nnukwu ego, ma ọ bụ maka ndị njikwa akaụntụ PPC tozuru oke na ahụmịhe iji weghachi akaụntụ ike gwụrụ.
Tags: brandahia ahiamgbasa ozi googleakwụ ụgwọ ọchụchọppc ikappc ahịa
Chris Bross Monday, August 29, 2011 Monday, October 12, 2015
Gịnị kpatara na ozi ịntanetị anaghị eme ya na Igbe mbata?
Ike nke iri abụọ na iri na otu WordPress Isiokwu
Aug 29, 2011 na 11: 40 AM
Onye ọ bụla chọrọ ịzụ ahịa otu ihe kwesịrị ịma na ndị mmadụ na-enweta mmetụta ha. Iji bido, jiri nchegbu na aha mgbasa ozi gị iji nwee ike ịkpalite mmetụta ndị na-ege gị ntị, ahụkwara m WebEnrich nke na-elekọta PPC m.